कहिले होला ठुला लुटको प्रदाफास ? अर्बौंका ठेक्कामा हुँदैन अनुगमन, निर्माणमा बदमासी - RatoKalam.com is No one news portal.
कहिले होला ठुला लुटको प्रदाफास ? अर्बौंका ठेक्कामा हुँदैन अनुगमन, निर्माणमा बदमासी
काठमाडौं । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौंका ठेक्कामा एकपछि अर्को बदमासी हुने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटा मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनामा बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी बदमासी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनामा देखिएको छ । ती आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितीकरण योजना (क्यूएपी) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको, ती आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, आयोजना सम्पन्न गर्न प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, पुल महाशाखाबाट पुल आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन नसकेको, काम नै नसक्दै पहिला नै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएकाले बदमासी बढ्दै गएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तै, समस्या अन्य मन्त्रालय मातहतका आaयोजनामा पनि रहेको छ । राजधानीबाट ।